VOB Splitter: Sida loo Split / goo / Goo VOB Files
> Resource > Beddelaan > Sida loo Split / goo / Goo VOB Files
Sidaas laga yaabaa in aad leedahay file a VOB waaweyn, kuwaas oo ay u badan tahay waxa ku jira videos badan music kala duwan, oo aad rabto in aad kala song kasta ama ilaa cutubka qaybo yaryar. Xaaladdan oo kale, waxaa jira hab aad u fudud in lagaaga caawiyo in aad si deg deg ah lagu sameeyo: Video Converter ( Video Converter u Mac ). Tani splitter VOB xirfad gelineya inaad kala video clips galay iyo badbaadin clip kasta file cusub. Shaqo kale oo gaar ah oo awood leh waa in, tan splitter file VOB kuu ogolaanayaa inaad dhoofin dhammaan faylasha cusub waqti. Taas macnaheedu waxa weeye in aad si fudud oo dhaqso u heli kartaa oo dhan clips video. Akhri si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan splitter VOB taas oo ay bartaan sidii ay u kala jabeen / dhimo / jar files VOB
Si fudud aan kala tagno VOB videos aad burburi aan khasaaro tayada wax.
Save oo dhan videos splitted waqti.
Beddelaan videos in qaab kale ama aad la jaan qaada Qalabka telefoonada gacanta.
1. Ku dar files VOB in splitter VOB this
Guji ka menu ama ku dhufatey "Add Files" button in ay leeg- tahay tan app ee kasoo dajiyaan files VOB ka disk adag in this splitter file VOB. Ka dib markii in, aad arki doonaa dhiganta baararka file VOB ayaa la tusay in ay leeg- ee barnaamijkan.
2. Split VOB galay clips
Muujinta birta ku file VOB aad rabto in aan kala tagno adigoo gujinaya fudud, ka dibna riix "Edit" badhanka ku yaal, ka dibna dooro "jar" ka sub menu. Daaqadda dhisayaa-up, ma aragtay laba sliders labada dhinac ee bar horumarka video ah? OK, kaliya jiidi oo hoos u labada sliders si ay u kala horreeyaan dhigay bilowgii iyo waqtiga soo gabagabeeyay, ka dibna riix "maqas" icon Macdan video clip ee la doortay.
Ka dib markii aad kala qaybsan tahay VOB soo galeen dhowr clips sida aad rabto, riix "OK" si loo badbaadiyo goobaha kuwan. Isla markiiba, video clips ku soo xulay tixi doona in ay leeg- ee app this.
3. clips dhoofinta VOB
Riix icon Qaabka ee dhinaca midigta ee interface ugu weyn, ka dibna tag "qaab"> "Video"> "DVD-Video" (VOB). Hit ah "badalo" si ay u dhoofiyaan. Iyada oo taageero ka Video Converter , waxaad si fudud oo dhaqso u heli kartaa qaybta ka mid ah file VOB aad. La yaabka leh, miyaanay ahayn?
Video Tutorial: Sida loo Split / goo / Goo Video Files
Sida loo Edit VOB Videos in Windows iyo Mac
Sidee inay la midowdo / Isku dar / biir VOB Video Files
Sida loo Beddelaan VOB in DVD